‘जलविद्युतमा लगानी गर्ने माछापुच्छ्रे अगुवा बैंक हो’ - UrjaKhabar ‘जलविद्युतमा लगानी गर्ने माछापुच्छ्रे अगुवा बैंक हो’ - UrjaKhabar
२० वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव संगालेका सुमन शर्मा अहिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । पछिल्लो समय बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको दायरा निकै फराकिलो बनाउँदै गएको छ । लगानी गर्नुपूर्व गहन अध्ययन गर्ने हुनाले भौगोलिक, व्यवस्थापकीय, प्रवद्र्धक र वित्तीय दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिएका आयोजना छनोटमा पर्ने गरेका छैनन् । यही कारण पनि जलविद्युतमा बैंकको लगानी सुरक्षित देखिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोप, भौगोलिक जटिलता, लगानीयोग्य पुँजी अभाव र व्यवस्थापकीय हिसाबले जलविद्युतमा लगानी चुनौती पनि बन्दै गएको छ । लगानी गर्नुपूर्व राम्रो अध्ययन गरे पनि केही आयोजनामा केही बैंकको लगानी फसेको अवस्था छ । हरेक वर्ष खोलामा घट्ने गरेको पानीको बहाब (हाइड्रोलोजी) ले पनि यो क्षेत्रको लगानीमा जोखिम बढ्दै गएको बैंकर तथा जलविद्युत प्रवर्द्धक बताउँछन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शर्मासँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :
अहिले बैंकको लगानी संरचना कस्तो ?
प्राथमिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको मार्गनिर्देशन छ । यसमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्र छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने लगानी गइरहेको छ । हामीले लक्ष्य हासिल गरिरहेकै छौं । अझ ऊर्जामा हामीले तोकिएभन्दा बढी लगानी गरेका छौं ।
लगानी विविधिकरण गर्ने सन्दर्भमा बैंक साना–साना कर्जादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनामा पनि गइरहेको छ । अवसर जहाँ छ, त्यहाँ हामी पुगेका छौं । पूर्वाधार क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र कर्पोरेट क्षेत्रमा १३ प्रतिशतसम्म लगानी भइरहेको छ । समग्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको लगानी निकै विविधिकरण छ ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्ड ऊर्जालाई मानिएको छ । बैंकले यो क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ?
अहिलेसम्म हाम्रो कूल लगानीको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्वदेशी बैंकहरूमध्ये ऊर्जा तथा जलविद्युतमा लगानी गर्ने हामी नै अगाडि हौंला । जलविद्युतमा लगानी गरेको अनुभवसँगै हामीसँग दक्ष र आयोजना छनोट गर्न सक्ने कर्मचारी छन् । यसैले पनि यो क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल लगानीको २५ प्रतिशत प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशत ऊर्जा र पर्यटनमा पुग्नुपर्ने भनेको छ । हामीले १६.५ प्रतिशत पुर्याइसकेका छौँ । जसअन्र्तगत बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएकोमा४ अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै प्रवाह भइसकेको छ ।
अधिकांश बैंकले ऊर्जा वा पर्यटनमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुग्यो अब यसमा लगानी हुँदैन भनिरहेका छन् । माछापुच्छ्रेको अवस्था पनि त्यस्तै हो ?
आजको दिनमा पुग्यो होला । भोलि त्यो नहुन सक्छ । अवसर कहाँ छ भनेर खोज्दा फेरि पनि ऊर्जा र पर्यटन नै हो । राष्ट्र बैंकले भने वा नभने पनि यो क्षेत्रमा जानैपर्छ । हाम्रो पनि सीमा पुग्यो । यसो भन्दैमा यो क्षेत्रमा नजाने भन्ने होइन । अब छनोट गरेर राम्रा वा आकर्षक आयोजनामा जान सकिन्छ ।
आम्दानी राम्रो भएका, लागत कम देखिएको, दक्ष प्रवद्र्धक वा इक्विटी राम्रोसँग हाल्न सक्ने समूह छनोट गरेर लगानी गर्न सकिन्छ । समग्रमा आर्थिक र प्राविधिक सूचक राम्रो रहेका आयोजनामा लगानी गर्न सीमा पुग्दैमा रोकिँदैन । भोलिका दिनमा १५ प्रतिशतको सीमा बढ्न सक्छ । फेरि लगानी बढाउनैपर्छ ।
बैंकले अहिलेसम्म कति वटा आयोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ?
२७ वटा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएर काम सुरु भइसकेको अवस्था छ । लगानी गर्ने प्रक्रिया वा वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा ५ वटा आयोजना छन् । यी सबै जोड्दा ३८४.५ मेगावाटका ३२ आयोजना भए । ती मध्ये १ मेगावाटभन्दा साना ४ मेगावाटका ५ आयोजना छन् । जसमा बैंक एक्लैले लगानी गरेको छ ।
हाम्रो नेतृत्वमा लगानी वा वित्तीय व्यवस्थापन भएका १५५.४ मेगावाटका ६ आयोजना छन् । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो भिजन इनर्जी एन्ड पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ५७.५ मेगावाटको नुप्चे–लिखु हो । यो सँगै बझाङमा निर्माण भइरहेको ३८.७ मेगावाटको सानीगाड, ग्लोबल हाइड्रोको ३३.४ मेगावाटमा पनि माछापुच्छ्रेकै नेतृत्वमा लगानी भएको छ । टुन्डी पावरले निर्माण गर्न लागेको ३५.५ मेगावाटको आयोजनामा सह–नेतृत्वमा लगानी हुँदैछ ।
बैंकले लगानी गरेका कति आयोजना सञ्चालनमा आए ?
रुग्ण आयोजना भनेर अहिले आइरहेका करिब २५ मध्ये ३ आयोजनामा हाम्रो पनि लगानी छ । ती सञ्चालनमा आइसेकेको र केहीमा समस्या देखिए पनि उक्त आयोजनाका प्रर्वद्धकहरू मार्फत आएको प्रतिवद्धताले भुक्तानीमा धेरै समस्या देखिएको छैन ।
बैंकले जलविद्युतबाहेक ऊर्जाका अन्य स्रोतमा लगानी गरेको छ कि छैन ?
हामीले जलविद्युतबाहेक सोलार, वायु वा बायोग्यासमा लगानी गरेका छैनौं । सोलारमा लगानी गर्नुपर्यो भनेर कम्पनीहरू आइरहेका छन् । यसमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकासमा जोड दिइरहेको छ । यसो हुँदा भोलिका दिनमा सोलार वा वायुमा पनि लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
अब बैंकको लगानीको बढी प्राथमिकताको क्षेत्र कुन हुन्छ ?
कुनै पनि बैंकले एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्दैनन् । यसो गर्दा बढी जोखिम हुन्छ । जलविद्युत वा पर्यटनमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । विविधिकरण गर्नुपर्छ । जनताको निक्षेप एकै ठाउँमा खन्याएर लगानी सुरक्षित हुँदैन ।
हामी लगानी गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गछौं, कुन क्षेत्रमा जाँदा बढी सुरक्षित हुन्छ वा राम्रा आयोजना कसरी छनोट गर्ने भन्नेमा । यसैले हामी जहिल्यै जोखिम पनि विविधिकरण गरेर काम गरिरहेका हुन्छौं । एउटा क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसले अर्कोमा असर नगरोस् ।
बैंकले २७ वटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाइसक्यो । ५ वटा पाइपलाइनमा छन् । तपाईंहरू लगानी गर्नुपूर्व कुन–कुन पक्षको अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुहुन्छ ?
कुनै पनि जलविद्युत आयोजनामा एउटै मात्र पक्ष हेरेर हुँदैन । जस्तो, हेड, इन्टेक, आरक्षित क्षेत्र, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । हाइड्रोलोजी (खोलामा उपलब्ध पानीको वार्षिक बहाब), सडक र प्रसारण लाइन त आधारभूत पक्ष नै हुन् । यिनको सुनश्चितता हुनैपर्छ । इक्विटी हाल्न सक्ने प्रवद्र्धक छन् कि छैनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । सामाजिक पक्ष पनि चुनौतीको क्षेत्र हो । यी चुनौतीमा बढी लगानी गर्नुपर्यो भने आयोजनाको लागत बढ्छ ।
आयोजना पहिचान, अध्ययन र लगानी गर्ने सन्दर्भमा बैंकहरूले इन्जिनियरिङ युनिट पनि राख्ने गरेको देखिन्छ । माछापुच्छ्रेमा छ कि छैन ?
हामीले त्यस्तो कुनै युनिट बनाएका छैनौं । तर, आयोजनाको क्रस भेरिफाई गर्न स्वतन्त्र परामर्श निकायको सहयोग लिन्छौं । त्यसमा हाम्रो आफ्नो अध्ययन त भइहाल्छ । यो क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव भएकाले हाम्रा कर्मचारी पनि इन्जिनियरभन्दा कम छैनन् ।
बैंकले लगानी गरेका मध्ये खराब ऋणका आयोजना कति छन् ?
आजसम्म त्यस्तो खराब ऋण भन्ने त छैन । तर, डिफल्ट भएका आयोजना छन् । जस्तो, रुग्ण भनिएका केही आयोजना भए । तिनमा सुरुमा लगानी गर्दा अनुभव, दक्षता र जलविद्युत क्षेत्रबारेको बुझाई पनि कम थियो होला । राम्रोसँग हाइड्रोलोजी वा प्राविधिक पक्षको अध्ययन नभएर पनि समस्या आएको हुन सक्छ । यसले आम्दानीमा असर गरेर रुग्ण बनेका होलान् । आजको दिनमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू धेरै अनुभवी भइसकेको जस्तो लाग्छ ।
सुरुका दिनमा ३ मेगवाटको पिलुवा खोलामा लगानी जुटाउन बैंकहरूलाई बुझाउन निकै गाह्रो थियो । करिब २६ वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रले ६ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिसक्यो र बैंकहरूले पनि लगानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ती रुग्ण आयोजनाका कारण फेरि बैंकहरू पछाडि हट्ने अवस्था देखिएको हो ?
आयोजनाहरू छनोट गर्ने क्षमताको पनि कुरा आउँछ । एउटामा समस्या आयो । अब अर्कोमा नगर्ने भन्ने हुनु हुँदैन । आज हिजोको जस्तो अवस्था छैन । धेरै बैंकहरूले राम्रो अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । हचुवामा लगानी गर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । १५ प्रतिशतको सीमा पुग्यो अब नगर्ने भन्ने अवस्था केही हदसम्म आउन सक्छ । हाम्रो हकमा राम्रो आयोजना छ भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।
लगानीको सीमा त पक्कै बढ्छ । अर्थतन्त्रको आकार र बजारको वार्षिक मूल्यबृद्धिको कारण पनि लगानीको दायरा फराकिलो हुन्छ । यसो हुँदा ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा पनि सम्भावना बढ्दै जान्छन् । यसैले, राम्रो आयोजना छनोट गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।
बैंकले कतिपय खराब कर्जाको ‘प्रोभिजन’ गरेर निश्चित बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ । जलविद्युतमा पनि यसो गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन ?
बैंकहरूले लगानीका सूचकको संरचनागत फेरबदल गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा केही खराब कर्जाको प्रोभिजन पनि गरिन्छ । तरलता व्यवस्थापन, अन्तर–बैंक कारोबार जस्ता कारणले जलविद्युतकै लागि थप प्रोभिजन गरेर राख्छन् भन्ने लाग्दैन । तर, भोलिका दिनमा त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाहरू धमाधम बनिरहेका छन् । तर, विद्युत खपत गर्ने आन्तरिक बजार विस्तार भएको छैन । प्राधिकरणले विद्युत किन्छु भनेर सम्झौता त गरेको छ तर भुक्तानी दिन सकेन भने प्रवद्र्धक र बैंकको लगानी जोखिममा पर्छ । यसलाई कसरी हेरिएको छ ?
विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे (लिऊ वा तिर) अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ । कसरी दिन्छ ? कहाँबाट दिन्छ ? त्यो उसको कुरा भयो । हिजो घाटामा रहेको संस्था आज अर्बौं रुपैयाँ नाफामा गइसक्यो । यसैले भोलि समस्या होला भन्ने त लाग्दैन ।
अब लोडको कुरा रह्यो । हामीले आन्तरिक लोड बढाउनै सकेका छैनौं । हरेक घरले आफूलाई चाहिने लोडअनुसार विद्युत प्रयोग गर्नै सकेका छैनौं । हरेक घरमा कम लोड भएकैले वासिङ मेसिन, माइक्रो वेभ, हिटरलगायत उपकरण चल्दैनन् । विद्युतीय उपकरण नचलेपछि मान्छेले विकल्पमा ग्यास रोज्छ । यस्तो अवस्था आउनु भएन ।
स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्यो । यसतर्फ सरकार वा सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्यो । विद्युतको लोड बढाउँदै यसमा सर्वसाधारणलाई बाध्य पार्दै जानुपर्छ । यो सँगै सरकारले बाहिरी बजारमा विद्युत व्यापार गर्न भारत तथा बंगलादेशसँग समझदारी गरेको छ । भविष्यमा आन्तरिक र बाह्य बजार फराकिलो बनाउँदै जानुपर्छ ।
अहिले निर्माण भइरहेका करिब ६ हजार मेगावाटका लागि त बजारको समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, उत्पादनसँगै अब खपत र बजार विस्तारलाई पनि त्यतिकै महत्त्वका साथ विकास गर्नुपर्छ । देशको समृद्धि सोझै जलविद्युत र पर्यटनसँग जोडिएको छ भने यसको विकास र विस्तारको विकल्प छैन ।
एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, हिजो प्रतिमेगावाट १२–१३ करोड रुपैयाँ आयोजना बन्थे । आज न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, प्राधिकरणले विद्युत खरिद दरमा कुनै फेरबदल गरेको छैन । यो पक्षमा सरकार वा प्राधिकरणले हेरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
लगानीको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चुनौती वा जोखिम कुन क्षेत्रमा छ ?
जति ठूलो उद्योग वा लगानीको क्षेत्र भयो त्यति नै चुनौती थपिँदै जाने हो । यसमा सामाजिक, वातावरणीय लगायत बहुआयामिक पक्षको जोखिम हुन्छ । जलविद्युतकै कुरा गर्दा स्वपुँजी (इक्विटी), बजार, प्रवद्र्धकबीचको विवाद वा द्वन्द्वको जोखिम देखिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै जाने भन्ने हो ।
कतिपय प्रवर्द्धकले लगानी गर्छु भन्छन् तर पैसा हुँदैन । यसले आयोजनालाई असर गर्छ । पुँजी हालेर आयोजना समयमै बन्छ कि बन्दै भन्ने चुनौती त्यतिकै हुन्छ । यस खालका जोखिम प्रायः सबै क्षेत्रमा छ । जलविद्युतमा त अझ मानव पुँजीको अभाव देखिएको छ, निर्माण क्रममा होस् वा काम पूरा गरेर सञ्चालन गर्दा । प्राविधिक पक्षको नियमन, अनुमगन र सुपरिवेक्षण गर्ने योग्य इन्जिनियर छैनन् । आयोजनामा इन्जिनियरको तानातान छ । अर्को, पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त सिभिल कन्ट्र्याक्टर (ठेकेदार) छैनन् ।
दक्ष ठेकेदार नहुँदा धेरै आयोजना एकै पटक सुरु हुन सकिरहेका छैनन् । यता, साना आयोजनामा पनि विदेशी ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आयातमा पनि समस्या छ । आपूर्तिकर्ताले ‘प्याकेज’का पर्याप्त उपकरण ढुवानी नगर्ने समस्या देखिएको छ । यही कारण प्रवद्र्धक अब चीन र भारतीय कम्पनीलाई छोडेर युरोपतिर जान थालेका छन् ।
बैंकहरूले कर्पोरेट क्षेत्रमा कम र जलविद्युतमा बढी ब्याजमा लगानी गर्छन् भन्ने गुनासो आइरहन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?
यो गलत हो । हामीले त्यसो गरेका छैनौं । व्यक्तिगत ओडी (ओभर ड्राफ्ट) ऋण लिनेलाई सबैभन्दा बढी ब्याज लगाउँछौं । किनकि, त्यो उत्पादनशील क्षेत्र होइन । यसमा निरुत्साहित पनि गरिएको हुन्छ ।
अटो लोनमा केही खुकुलो हुन सक्छ । ‘नाडा अटो सो’ जस्ता कार्यक्रममा एक–दुई वटा प्रचारात्मक योजना ल्याउनु फरक कुरा हो । सधैं यस्तो गर्दैनौं । होम लोन (घर कर्जा) मा केही कम हुन सक्छ । तर, ५–७ प्रतिशत होइन । बैंकहरूको आधार ब्याजदर नै १० प्रतिशत छ ।
माछापुच्छ«ेको १०.५६ प्रतिशत आधार ब्याज छ । जलविद्युतमा आधार ब्याजमा २ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर लगानी गर्ने हो । त्यो क्षेत्रमा जोखिम पनि बढी छ नि । जोखिमको मूल्य त लिनैपर्छ । कुनै समय हामीले ६ प्रतिशतमा पनि जलविद्युतमा लगानी गरेका थियौं । निक्षेपको ब्याज घट्यो भने लगानीको पनि घट्दै जान्छ ।
प्रवद्र्धकले ब्याज बढी भयो भन्नु जायज हो । किनकि, १० प्रतिशतमा पैसा लिइरहेकोमा ब्याज बढेर १३ वा १४ प्रतिशत पुग्यो भने त त्यो बढी नै हो नि । यसले आयोजनाको प्रतिफलमा असर गर्छ । हामीले ब्याजदरको उतारचढावले आयोजनामा कति असर गर्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेरिरहेका हुन्छौं ।
पछिल्लो समय बनेका सबै आयोजना लागतभित्र बनेका छैनन् । बैंकिङ दृष्टिकोणबाट हेर्दा लागत बढ्नुका मुख्य कारणहरू के हुन् ?
पहिलो त समय नै हो । निर्माण अवधि बढेपछि त्यसले हरेक क्षेत्रमा असर गर्छ । सामाजिक पक्ष कतिको जटिल छ भन्ने पनि हो । स्थानीयका नाजायज माग पूरा गर्न बढी खर्च गर्नुपर्ने भयो भने लागत बढ्ने भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा आउने उतारचढावले समेत असर गर्छ ।
बैंकहरू र प्रवद्र्धकको मिलेमतोले पनि आयोजना महँगो बनाइन्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
यो सम्बन्धित पक्ष वा नियामक निकायले अनुगमन गनुपर्छ । अरू बैंकहरूको बारेमा मलाई जानकारी भएन तर हाम्रो बैंकको सन्दर्भमा हामी कहिल्यै समस्या बन्दैनौं । खर्च भुक्तानी लिन आयोजनाले पनि समयमा आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पुर्याउनुपर्छ ।
बैंकहरूलाई मुख्य संरचना निर्माणअघि आवश्यक पर्ने खर्चको रूपमा ‘ब्रिज ग्याप लोन’ पनि दिइरहेका हुन्छन् । बैंकले त आयोजनालाई धेरै सहयोग गरेका हुन्छन् । मलाई लाग्दैन, बैंक र प्रवद्र्धकबीच म्यानुपुलेसन हुन्छ भन्ने । एउटा आयोजनामा लगानी गर्न ४–५ वटा बैंक मिलेका हुन्छन् । अझ अचेल बैंकरहरू बढी जिम्मेवार, पारदर्शी हुँदै गएको देखिन्छ ।
सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न चाहिने लगानी देशमा छैन । बैंकहरू पनि सक्षम छैनन् भन्ने गरिन्छ । स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रले कतिसम्म लगानी गर्न सक्लान् ?
एउटै बैंकले धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ जस्तो लाग्दैन । पैसा सिर्जना गर्ने क्षमता छैन । ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ गर्न सक्छन् । सबै मिलेर जाँदा देशको आवश्यकता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुट्छ । सरकारले पुँजी निर्माणका विकल्पहरू सिर्जना गर्नुपर्यो ।
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएर मात्र पुँजी निर्माण हुँदैन । अर्को, हामीले ब्याज बढाउना साथ विदेशी वित्तीय संस्थाले पैसा ल्याउने र बाहिर बढे यहाँको पैसा जाने जस्तो ‘क्यापिटल कन्भर्टिबल’ प्रणाली छैन । कुनै पनि वाणिज्य बैंकले सक्दो गर्ने हो, क्षमता हुँदासम्म ।
तरलता बैंकले सिर्जना गर्न सक्दैनन् । यो देशको कुरा हो । गत वर्षको शोधनान्तर बचत हेर्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक थियो भने चालू वर्षको ३ महिनामा १४ अर्ब धनात्मक (सकारात्मक) छ । यो धेरै राम्रो हो । यसले गत वर्षभन्दा तरलताको अवस्था राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन् । यसमा केही खुकुलो हुनुपर्ने हो कि । विशेष आयोजनाका लागि पनि स्वदेशी बैंकसँगको सहकार्यमा विदेशीले लगानी गर्न सक्छन् ।
सरकारले स्वदेशी लगानीमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना ल्यायो भने बैंकिङ क्षेत्रले कति योगदान गर्न सक्ला ?
ठ्याक्कै यति नै भनेर भन्न त नसकिएला । त्यो स्तरसम्म नेपाली बैंकहरू पुगेको अवस्था होइन । हामी २–३ वर्षदेखि तरलताको समस्यामा छौं । त्यो क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्न विदेशी वित्तीय संस्थासँग सहकार्य भयो भने सम्भव छ ।
पछिल्लो समय केही बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर पैसा भित्र्याइरहेका छन् । माछापुच्छ्रेले पनि यसबारे केही योजना बनाएको छ ?
हामी त्यसको तयारी गरिरहेका छौं । विदेशबाट पैसा ल्याउने र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने । केही समयमा ब्रेक थ्रु पनि हुन्छ होला । तर, कन्ट्री रिस्क हाई (उच्च जोखिम) भएको हुनाले लगानीकर्ता सहजरूपमा आउन मान्दैनन् । विदेशी बैंकको लगानी भएका बैंकलाई भने केही सहज छ ।
विदेशबाट २–३ करोड डलर भित्र्याउन लामै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यदि, हामीले २–३ अर्ब रुपैयाँ प्राथमिकताको क्षेत्रमा ल्याउने हो भने ऋण लिने निकाय तयार हुनुपर्यो । निकाय खोज्नुपर्यो । ऋण लिएर अफर लेटर ठिक्क पारेर उताबाट पैसा ल्याएर दिनुपर्यो । विदेशबाट पैसा ल्याएर रिजर्भ राख्ने र ग्राहक खोजेर लगानी गर्न कुनै बैंकले सक्दैनन् ।
फेरि, ऋण लिने व्यक्ति वा निकाय खोजेर पैसा ल्याउन खोज्दा विदेशी बैंकले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि हुन्छ । ल्याएको पैसा प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । र, त्यहाँ संस्थागत सुशासनको कुरा पनि उठ्छ । यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध (बोटल नेक) हो जस्तो लाग्छ ।
पुँजी निर्माण गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ’ अत्यावश्यक हो ?
आवश्यकमात्र होइन, जरुरी भइसक्यो । कन्ट्री रेटिङसँगै बैंकहरूको पनि रेटिङ भइदियो भने विदेशीहरूका लागि एउटा आधार तयार हुन्छ । अनि, उनीहरूले गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रस्ट हुन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन वा बैंकहरूले नै विदेशबाट ऋण ल्याउन पनि रेटिङ चाहिन्छ ।
जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि सरकार वा राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरणको भूमिका पर्याप्त छ ?
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने कुरामा काम भइरहेको छ । रुग्ण आयोजनाकै कारण विकास बैंकहरू जलविद्युतमा लगानी गर्न अगाडि नसरेको अवस्था देखिन्छ । यो विगतमा गरेका कामको परिणामले पनि हुन सक्छ ।
राष्ट्र बैंक लगानी व्यवस्थापनमा खुकुलो नै छ । ब्याज पुँजीकरण गर्न दिएकै छ । सरकारको तर्फबाट केही झन्झटिला प्रक्रिया छन् । आइईई (पूर्व वातावरणीय परीक्षण) र इआइए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्दा, उत्पादन अनुमतिपत्र लिँदा वा पिपिए गर्दा प्रशस्त समय लाग्ने गरेको छ । यसमा एकद्वार प्रणाली भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो ।
यसले अप्रत्यक्षरूपमा बैंकलाई असर गर्छ । उत्पादन अनुमतिपत्र वा पिपिएमा ढिलो हुनासाथ लागत बढ्छ । इक्विटी थप्नुपर्छ । बैंकको ब्याज बढ्छ । अन्ततः जति लागतमा आयोजना बन्छ भनिएको थियो, त्यो बन्दैन । सम्भाव्य देखिएको आयोजना सम्भाव्य नदेखिन सक्छ ।
विष्फोटक पदार्थ आयातमा पनि सेनाले त्यतिकै समय लगाइदिन्छ । जुन प्रवद्र्धकका लागि निकै पीडादायक हुन्छ । र, बैंकको लगानी असुरक्षित भइरहेको हुन्छ । यस्ता कुरामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । किनकि, यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिएको छ ।